Isikhwama Sephepha Esingokwezifiso
Ibhokisi Lephepha Lezifiso
Inqubo yokukhiqiza ibhokisi lokupakisha
Umkhiqizi wamabhokisi okupakisha uyazi ukuthi ukukhiqizwa kwebhokisi lokupakisha kuyinqubo eyinkimbinkimbi. Ubungcweti obuhlukahlukene ngokuvamile bacabanga ukuthi uma ukucela ukuthi wenze ukukhiqiza namuhla, ungakuthola ngokushesha. Eqinisweni, yonke imboni inomsebenzi wayo wokusebenza. Kudingeka ibhokisi lekhadibhodi lokupakisha eliqeqeshiwe. M...
Ibhokisi lokupakisha lekhadibhodi lesitayela sencwadi Ukukhiqiza
Ngobusha bomkhiqizo, umenzi wokupakisha uthatha izinhlungu ezinkulu ngempela. Ngaphansi kwemfuneko yokuqinisekiswa kwekhwalithi, isimo esiyingqayizivele siyadingeka. Yingakho ibhokisi lesipho lokupakisha elimise okwencwadi laphuma. Ngakho-ke inqubo yokukhiqiza yebhokisi lokupakisha elinomusa lenziwa ngokwezifiso ...
Amabhokisi okupakisha izipho asongekayo
Ukukhiqizwa kwebhokisi lokupakisha lesipho : 1. Impahla: Iphepha elikhethekile elifakwe nephepha lebhodi elimpunga elingu-1000 g 2. Inqubo: i-bronzing. Ukwakhiwa kwebhokisi lephepha lokupakisha izipho : MOQ: izingcezu eziyi-1000 (ngokusekelwe ezintweni ezibonakalayo, ubuciko, inani lekhotheshini, inani elikhulu kanye nenani elihle) Ukucaciswa komkhiqizo: Kwenziwe ngokwezifiso o...
Kungani uchungechunge lobucwebe lusetha amabhokisi okupakisha angokwezifiso zisebenzisa iphepha elengeziwe esikhundleni serabha?
Kholwa ukuthi abangani abaningi abafuna ukwenza ubucwebe basethe amabhokisi okupakisha enziwe ngendlela oyifisayo bafuna ukwazi ukuthi kungani amabhokisi obucwebe axhunywe imibungu yenjoloba aye aduma kangaka esikhathini esidlule. Ngemuva kweminyaka eyi-10, isimo sesiqale ukushintsha ngokushesha, futhi izimboni eziningi zamabhokisi okupakisha seziqalile ukuguqula ...
Umkhiqizi wokuphrinta wezincwadi ochwepheshe waseChina
Thola umkhiqizi omuhle wokunyathelisa izincwadi emakethe akulula, kudingeka uhlole ukuthi afanelekile yini, ungabona emaphuzwini angezansi : Unyaka osungulwe Ukuthi unolwazi lokuthekelisa kusevisi yaphesheya kwezilwandle : phendula ngokushesha, thatha umthwalo wemfanelo wezinkinga uma kukhona izindleko zokulondoloza : co...
Umkhiqizi owenziwe ngokwezifiso webhokisi lesipho lekhadibhodi
Ibhokisi lesipho lekhadibhodi elenziwe ngokwezifiso I-oda elincane :ubuningi bama-pcs angu-1000 (kusekelwe ezintweni, ubuciko, inani elicashuniwe, inani elikhulu kanye nenani elihle) Imininingwane yomkhiqizo: Kwenziwe ngokwezifiso uma kudingeka, idizayini yamahhala Iphepha lobuso (elikhuphukayo): Iphepha lethusi eliphindwe kabili, iphepha elikhethekile, i-kraft paper , ikhadi elimnyama...
Umkhiqizi ngokwezifiso wezincwadi zebhodi
Indlela yokuthola umkhiqizi omuhle wezincwadi zebhodi lezingane? Bona umkhiqizi wezincwadi ukuthi unesipiliyoni seminyaka kulo mkhakha; Bona ukuthi bangochwepheshe ngokwanele yini ukusiza ekongeni izindleko; Bona ukuthi bayakwazi yini ukuxazulula izinkinga zangemuva kokuthengisa uma zikhona; Bona ukuthi bangaphinde...
Amabhokisi Okupakisha Amaphepha Angokwezifiso
Izinzuzo zokwenza ngokwezifiso amabhokisi okupakisha amaphepha 1. Inzuzo yokuvikela imvelo: ayigcini nje ngokuphinda isetshenziswe, kodwa futhi ingasetshenziswa ukwenza umanyolo ngemikhiqizo yokupakisha yemfucuza yephepha; 2. Izinzuzo zobuchwepheshe: izinto zokupakisha zephepha zine-elasticity encane, azithintwa ukushisa kanye ...
Ingakanani ibhokisi lekhadibhodi lezimonyo?
Ingakanani ibhokisi lekhadibhodi lezimonyo? Imibuzo enjalo ivame ukubuzwa ngamakhasimende. Noma ngabe kudala ngithengisa, ngizizwa ngingenamandla ngemuva kokuzwa lo mbuzo. Lapha abakhiqizi bebhokisi lokupakisha lezimonyo bangabelana nawe ukuthi kungani lo mbuzo ungaphendulwa. Okokuqala nje, ...
© Copyright - 2012-2023 : Wonke Amalungelo Agodliwe.